I-Sanitizer yesandla engenamanzi | Ibulala i-99.99% yeeJamani eziyingozi
Ikhaya / iimveliso / Isandla seSanitizer Gel
I-Instant yeSanitizer Gel
I-OPS yesandla sokuhlambela ngegciwane sokuhlanjululwa kwesikhumba kwangoko, ukuthamba, ukhuseleko oluhlala luhleli. Sebenzisa iimveliso imini yonke ukunceda ukukhusela ngokuchasene nokusasazeka kweentsholongwane. Nokuba usekhaya okanye emsebenzini, ifomula yethu enobulali isecaleni kwakho naphi na apho uyifuna khona kakhulu.
Gel Ijeli yesandla se-antibacterial iya kugcina izandla zakho zicocekile.
Ukuthantamisa kunye nokungacaphukisi, ukubulala iintsholongwane ngokuthambileyo.
♣ Akukho kuhlamba, ukomisa ngokukhawuleza, kulula ukuyisebenzisa.
♣ Ukuthambekela kobuninzi be-Gel, unokulilawula ngokulula inani.
I-OPS eSebenzayo ye-Diselon ye-Instant
Yenziwe nge-ethanol ukuphucula impilo kunye nolusu lwezempilo, iqulethe umswakama kwaye ityebile zizinto ze-aloe, ivumba elipholileyo.
Izithako ezithobekileyo zikhuselekile ekusetyenzisweni rhoqo. Ngokwe-WHO / CDC Iziphumo zomgangatho wokuvavanya. Kwangoko ibulala i-99.99% yeentsholongwane ngaphandle kwamanzi
kunye neentsholongwane kulusu olunokubangela izifo kwaye kumise ezinye iintsholongwane. Izicoci ezenziwe ngesandla zotywala zinokukhawuleza
ukunciphisa inani leentsholongwane ezandleni. Le fomyula icocekileyo ithintela ukwanda kwezinto ezingcolileyo ukuze igcinwe
impilo yosapho lwakho.
Gcina izandla zicocekile kwaye zisempilweni ebantwaneni, kwaye ayonakalisi ulusu, inomsebenzi wokubamba amanzi kunye nokufuma.
I-Wholesale Sanitizer Gel evela kwiModeli eyahlukeneyo
Sabonelela ngezinto ze-50ML, 80ML, 100ML, 500ML.
Ungayisebenzisa njani iSanizer?
Thatha inani elifanelekileyo lemveliso ukunyibilikisa izandla zakho kwaye uyihlikihla imizuzwana engama-20 ukuya kwengama-30 kude kube lulwelo
igubungela izandla zakho, ilinde ukuba yome, kwaye ungahlambi ngamanzi.
Yisebenzise kwiofisi yakho, ekhaya, emotweni yakho, esikolweni, okanye kwenye indawo ekufuneka ucoce izandla zakho ngokukhawuleza.
Iphakheji ye-antibacterial Gel
Nika ingqwalaselo ngakumbi
Nceda uqaphele ukuba le ndlela ayifanelekanga xa izandla zibonakala zingcolile okanye emva kokusebenzisa indlu yangasese.
Kwezi meko, ukuhlamba izandla kuyafuneka.
Le mveliso yeyokusetyenziswa kwangaphandle. Nceda ungayithathi ngaphakathi. Sebenzisa ngononophelo kubantu abangakwaziyo ukuhlala notywala.
Nceda ugcine ngokungafikeleleki ebantwaneni.
Ngaba unomdla wokuthenga izinto zokucoca ngesandla? Iinkcukacha zoqhagamshelwano thina!
Iphepha leNgcaciso yeGel yeSanitizer
I-Gel yesandla sokuBulala i-disin
Umkhiqizo ocacileyo. 100ML, 500ML
Isithako Amanzi, ii-Aloe extended, Hum humantant, njl.
Ixesha lokuqinisekisa 3
MOQ Iibhotile ezili-100ML- 5,000, kunye neebhotile ezingama-500ML-2,500 XNUMX
Nceda uqinisekise ukuba ungumntu ngokukhetha Isicwangciso.